रोनाल्डोले युभेन्टस् छाड्ने, कहाँ जादैछन ? — Sanchar Kendra
रोनाल्डोले युभेन्टस् छाड्ने, कहाँ जादैछन ?
काठमाडाैं । ह्यारी केनलाई भित्र्याउन म्यानचेस्टर सिटी असफल भयो । तर, अब क्रिष्ट्रियानो रोनाल्डोलाई भित्र्याउन आतुर भएर बसेको छ । किनकी, यही समय रोनाल्डोले युभेन्टस् छाड्ने निर्णय लिएका छन् ।
स्पेनिस वेवसाइट मार्काका अनुसार रोनाल्डोले यस विषयमा प्रशिक्षक मास्सिमिलिआने एलिग्री र टेक्निकल डाइरेक्टर पाभेल नेदभेदलाई जानकारी दिइसकेका छन् । यसअघि रोनाल्डोले क्लबमै बस्ने निर्णय गरेका थिए । तर पछिल्लो समय उनको मुड परिवर्तन भइसकेको छ ।
युभेन्टस् अहिले रोनाल्डोका लागि उपयुक्त मुल्यको प्रतिक्षामा छ । मार्काका अनुसार ३ करोड युरोको हाराहारीमा रकम प्राप्त भए युभेन्टस्ले उनलाई बेच्नसक्छ । रोनाल्डोलाई भित्र्याउने अभियानमा म्यानचेस्टर सिटी निकै अघि छ ।
उता युईएफए वर्ष खेलाडीको अवार्ड पूरुषतर्फ चेल्सीका जर्जिन्हो र महिलातर्फ बार्सिलोनाकी एलेक्सिया पुतेयासले जितेकी छिन् । जर्जिन्होले यस सिजन चेल्सीलाई च्याम्पियन्स लिग र इटलीलाई युरोकप फुटबलको उपाधि जिताउन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएका थिए । त्यसैगरी, स्पेनकी एलेक्सियाले क्लब तथा अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल दुबैमा निकै उत्कृष्ट खेलेकी थिइन् ।
चेल्सीलाई च्याम्पियन्स लिग जिताउने थोमस टुचेलले उत्कृष्ट प्रशिक्षक, चेल्सीका इडुआर्ड मेन्डीले उत्कृष्ट गोलकिपर, म्यानचेस्टर सिटीका रुबेन डियासले उत्कृष्ट डिफेन्ड र चेल्सीका एनगोलो कान्टेले उत्कृष्ट मिडफिल्डरको अवार्ड जितेका छन् । उत्कृष्ट फरवार्डको अवार्ड बोरुसिया डर्टमुन्डका इर्लिङ हाल्यान्डले जितेका छन् ।